Chrome နှင့် ဇော်ဂျီဖောင့် ပြသာနာနေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
စိမ်းလန်းမြေ ( ပရဟိတ )
~~~~ ယနေ့ အသုံးပြုနိုင်သော Proxy မှာ HTTP Proxy = ၁၇၈.၁၈.၁၇.၂၁၁ ၊ Port = ၈၀၈၀ ဖြစ်ပါသည် .. အသုံးမပြုတက်သူများ ဒီလင့် မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ~~~~
Chrome နှင့် ဇော်ဂျီဖောင့် ပြသာနာ
// အချိန် :
မှာ Zawgyi ရော Unicode ရော အဆင်ပြေပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်းက သုံးနေတာတော့ ကြာပါပြီ။ ထုတ်ထားတုန်းကတော့ Lion တွက် ထုတ်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း သုံးကြည့်ရင်း ကြိုက်တာနဲ့ chrome သုံးပြီးတိုင်းဒါလေးကို သုံးဖြစ်သွားတာ ဒါကြောင့် စာရေးစာဖတ်ဖို့ Chrome မှာ ပြေလည်နေခဲ့တာ ။ တချို့က အခု Chrome မှာ Zawgyi ကို support လုပ်ပြီလို့ ထင်နေကြတယ်။ အကုန်လုပ်ပြီလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေးဘူး။ အပြည့်အလုပ်မလုပ်သေးပါဘူး။ တချို့ဆိုဒ်တွေမှာ လုပ်တယ်။ တချို့ဆိုဒ်တွေမှာ Error တက်တယ်။ ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့ Extension ကို သွင်းပြီး သုံးကြည့်ပါ။ အောက်က ပုံနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဟိုနေ့က ကျွန်တော် တင်တဲ့ ပိုစ့်တွေကို Error တက်နေတာရယ် ချက်ဘောက်မှာ မေးထားတာလေးရှိနေုလို့ ကျွန်တော် chrome ကနေ ဒီ Extension အဖြုတ်အတပ်လေး လုပ်ပြီး ပြန်စမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံကိုကြည့်ပါ။
ဒီ Extension ကို ဒီလင့်ကနေ သွားရော သွင်းလို့ရပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ...
လေ့လာရင်း မိမိသိရှိထားတာ လေးတွေကို အတက်နိုင်ဆုံး ပြန်လည်မျှဝေခွင့် ရရင်ကျေနပ်နေသူ တစ်ယောက်ပါ ..အားလုံးကို အစဉ်လေးစားစွာဖြင့် .. နေမင်းမောင် Follow Me on Google Plus or On Facebook
ကျေးဇူးပါတော်တော် အဆင်ပြေသွားပီ။အရင်ဆို တော်တာ် ဒုက္ခရောက်နေတာလေ။ ကျွန်တော်က chrome ကို ပို သုံးဖြစ်လို့။
ဘယ်လို မရတာလည်း မသိဘူး။ chrome ကနေပြီးတော့ https://chrome.google.com/webstore/detail/nalmimmiiohgbbjaekgpmdjglcgbnand ကိုဖွင့် Add လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ မရတာမျိုးရှိလာရင် chrome Option ထဲ့မှာ zawgyi တွေ ကိုသွားရွေးပေးလိုက်ပါ
အကိုပြောသလိုကျတော် add လုပ်လိုိက်ပါတယ်..ဒါပေမယ့်မြန်မာစာတွေကတချို့စာလုံးတွေဖတ်လို့ရပြီးတချိူ့စာတွေကဖတ်လို့မရဘူး.နောက်ပြီး chrome option ထဲမှာလည်း zawgyi ကိုရှာမတွေ့ဘူး..
အောက်ကလင့်မှာ ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ အဆင့် ၃ ကိုရောက်ရင် သူ့ဘာသာ ဖောင့်ပြင်ရမဲ့ ၄ နေရာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ လိုက်ပြင်ကြည့်ပါ အဆင်မပြေရင် ထပ်ပြောပါhttps://lh5.googleusercontent.com/-lgwfvA_jucE/Tu49z7c_kaI/AAAAAAAAAh0/ApOopneTqfE/s720/Untitled.png
ကျေးဇူးဘဲ....အကိုညွှန်ပြတဲ့အတိုင်း..ကျတော်font နေရာအားလုံးမှာမှာ Zawgyi -one ပြောင်းလိုက်တာအဆင်ပြေသွားပြီး..မသိသေးတဲ့ကျတော်သူငယ်ချင်းများကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းခွင့်ပြုပါလို့
Chrome ရဲ့ညာဖက်ဒေါင့်မှာ ဇော်ဂျီပုံလေးလဲပေါ်တယ်။ Options ထဲမှာလဲ ဖေါင့်ပြောင်းထားတယ်။ ဒါပေမယ်အကုန် Title Bar တွေမှာ လေးထောင့်လေးတွေဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချို့စာလုံးတွေလည်းဖတ်လို့မရဘူး၊ ဘာလို့လဲမသိဘူး။
ကိုနေမင်းမောင်ရေ......ကျနော့်ရဲ့ samsung galaxy tab 10.1 မှာ ဇော်ဂျီ သွင်းထားသော်လဲ website အတော်များများမှာ ဖတ်လို့မရတာများနေပါတယ်၊ အဲဒါကို ခင်ဗျားများ ကူညီနိုင်လေမလားလို့ စဉ်းစားမိပြီး အကူအညီတောင်းရပါတယ်၊ အရင်က ကျနော့်ရဲ့ Desktop PC မှာ google chrome နဲ့ Internet explore အပါအဝင် browser အတော်များများ မှာ ဖောင်္ဂျီဖွန့် ဖတ်မရပါဘူး၊ အများပြောနေကြဖြစ်တဲ့ Google Chrome ရဲ့ setting ထဲဝင်ပြီး ဖွန့်နေရာ ၄ ခုမှာ ဇော်ဂျီ ဖွန့်ကိုပြင်သော်လဲ မထူးခြားပါဘူး၊ ထင်ချင်တဲ့ဟာကထင်ပြီး မထင်တဲ့ဟာက မထင်ပါဘူး၊ လေးထောင့်ကွက်တွေနဲ့ တချို့နေရာတွေမှာ စာလုံးကမောက်ကမတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျနော်လဲ စိတ်ပျက်ပြီး ပစ်ထားလိုက်တာ ကြာပါပြီ၊ ဒီလိုနဲ့ မနေ့ကမှ ခင်ဗျားတင်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ် ကိုဖတ်မိပြီး Fonttagger ကို သွားပြီးဝင်လိုက်တာ အခုတော့ အကုန်လုံး ဘယ် website မဆိုဖတ်ရလို့ ဝမ်းသာမိသည်နှင့်အမျှ ကျေးဇူးလဲအထူးတင်တယ်ဗျာ၊ ဒါကြောင့် တဆက်ထဲမှာပဲ ကျနော့်ရဲ့ samsung galaxy tab 10.1 မှာဖြစ်နေတဲ့ နေရာအတော်များများမှာ ဇော်ဂျီဖတ်မရတဲ့ ပြဿနာကို ခင်ဗျားများဖြေရှင်းပေးနိုင်မလားလို့ လှမ်းပြီးအကူအေညီ တောင်းရပါတယ်ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ရဲ့ galaxy tab rSmawmh Google Chrome က သွင်းမရလို့ fonttagger နဲ့တော့ ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဗျို့၊ အဲဒါ ခင်ဗျား ကူညီနျိုင်မယ်ဆိုက ကူညီဖြေရှင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗျာ။လေးစားစွာဖြင့်ဇော်ဗလ
thank you very much,bro
Thank you so maney
thankalot brotherzinn
အခုတော့ ကိုနေမင်းမောင်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါပီဗျာ...နောက်များလည်း ပို့စ်တွေ များများတင်နိုင် ရေးနိုင်ပါစေလို့..ဆုတောင်းပေးပါတယ် :DP.S - ယခု comment ကို chrome browser သုံးပီးတော့ ရေးလိုက်ပါတယ်..
ကျွှန်တော်မှာ အစ ကMozilla Firefox က မြန်မာလို အကုန် ဖတ်လို့ ရတယ် အခုတလော ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး...မြန်မာလို တွေမပေါ်တော့ဘူး... အမျိူးလုပ်ပြီးပြီ မရပါဘူး အကိုရာ ....ဒါပေမယ့် ဆိုဒ်တွေကိုလျောက်ကြည့်ရင်း အကိုဆိုဒ်မှာတင်ထားတာ ကို လုပ်ကြည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေ သွားပါတယ်...ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်ဖျာ... ..
ဇော်ဂျီဖောင့်ကအပေါ်က tabမှာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ လေးဒေါင့်တွေပဲမြင်နေရတယ်။ အခုဒီစာရိုက်တဲ့အကွက်မှာလည်းလေးဒေါင့်တွေပဲဖြစ်နေတယ်။ တခြားနေရာမှာရိုက်ပြီး ခုဒီcomment အကွက်ထဲကို copy ,past လုပ်ပြီးလာတင်ရတယ်။လေးဒေါင့်တွေပျောက်အောင် ကူပါဦး။
အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ...Chorme ကနေ မြန်မာစာတွေ ကောင်းကောင်း ဖတ်လို့ရပြီ.......
thanks you ....
အကိုပြောတဲ့ ညာဖက်တောင့်မှာ အမပေါ်လို ကူညီပါဦး ပြီးတော့ မြန်မာစာလည်းရိုက်လိုမရသေးပါဘူး...ကူညီပေးပါနော်.. ကျေး
ကျေးဇူးပါ....အကို ဒါပေမယ့် ရေးတော့မပေါ်ဘူး.....
သူငယ်ငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ computerမှ ဇော်ဂျီးနှင့် zawgyi-keyboard-layout ကိုinstall လုပ်ဒါ မြန်မာလိုမပေါ်ဘဲ လေးတောင့်တွေဘဲပေါ်နေလို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကူညီပေးပါနော်။ချင်းကလေး
စာဖတ်သူရဲ့ Thank ဆိုသော စကားတစ်ခွန်းသည် နောက်ထပ်ပို့စ် တစ်ခုရေးရန် အတွက် အားဆေးတစ်ခွက် ဖြစ်ပါသည် .. ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် .. နေမင်းမောင်
စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ ( Facebook Page )
Phone ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီလင့်မှာမေးပေးပါ။
Internet Download Manager 6.08 Build7Beta
Keys for NORTON,Kaspersky,Dr. Web,ESET NOD32,Avast...
Malwarebytes Anti-Malware PRO 1.60.0.1800
3Planesoft Christmas Evening 3D Screensaver 1.0.0
Internet Download Manager 6.08 Build5Beta
iCare Data Recovery Software 4.6.3.3
RealPlayer v15.0.1.13 Final
Zards Software Cleanse Uninstaller Pro 8.0.0
Abrosoft FantaMorph Deluxe 5.2.7
White Christmas 3D Screensaver and Animated Wallpa...
Start Menu X Pro 4.01 Multilanguage
Gogo Loves English with Audio CD
Yamicsoft Vista Manager v4.1.5
Acer Aspire 4738 Notebook Drivers
Windows XP professional SP3 32-bit Black edition ...
Photoshop Clipart 2011 Collection
Waiting for background programs to close error ဖြေ...
Malwarebytes Anti-Malware PRO 1.60.0
Teach C++ in 24 Hours
Extra FLV SWF Video Converter 8.24
TrustPort USB Antivirus 2012 12.0.0.4848 Final
Internet Download Manager 6.08 Build3Beta
DAILY PREMIUM ACCOUNTS များ ယူရန်
RedCrab Calculator 4.01.00 + Portable
Christmas Eve 3D Screensaver v1.0
3herosoft iPhone to Computer Transfer v4.0.0
3herosoft iPad to Computer Transfer 3.9
PhotoInstrument 5.3.541+ Portable
ISO ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို Burn မလဲ၊ ဘယ်လို Mount မလဲ၊...
premium Account ဆိုတာ
Connectify Pro v3.2.0.22201
Notebook နှင့် Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်..
AutoRun Antivirus Pro 1.0 - The Professional Autor...
MS office 03,07,10 blue ,Black, VL and All Versio...
Ok Virus Cleaner and Skype Portable
How To Make 300 Mb Movies
IDM နှင့် ဖြေရှင်းနည်း
Internet Explorer Has Stopped Working error ဖြေရှင...
Borland Delphi 7.3.4.3 Full Version
USB Disk Security 6.1.0 Full Version
Deep Freeze v6.61.020.2822 Full Version
Luxand Blink Face Recongnition Pro 2.3
Extra Buttons ထည့်လိုသူများအတွက်
Ubuntu Boot Menu ကိုဖယ်ရှားရန်
MP3 Skype Recorder 3.1 Portable
TeamViewer 7.0 Build 12280 Final Portable
Network+ 2009 video tutorial
ဓာတ်ပုံ Slide Show လေးတွေကို အလွယ်တူ လုပ်ချင်သူမျာ...
YoWindow Unlimited Edition 2.0 Build 511
Software မသုံးပဲ Internet Speed လေးမြှင့်ပြီး သုံး...
G-Mail အကောင့်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်ထဲဖွင့်ချင်တယ် ဆိ...
Adobe Pagemaker 7.0 + Serial and Updates
Infinite Skills - Learning C++ Programming Video T...
Mask My IP v2.2.4.2
Mathematical Objects in C++
Nature Wallpapers Pack
Makeup Guide v1.2
English - Myanmar Dictionary For Andrious OS
Microsoft Access 2002 အသုံးပြုနည်း ( E-Book )
Animation Destop Toys For Windows
iSpy 3.5.0.0 Portable
Pediatric Imaging , Case Review Series
Microsoft Window7Complete
Window7အတိုအထွာလေးများ
FormatFactory 2.80 Portable Multilingual
Pearl Mountain Greeting Card Builder v3.1.4
Get IP and Host 1.4.2 + Portable
Nitro PDF Professional v7.0.1.5
All-Radio 3.40 Multilanguage
Auto Hide IP 5.2.1.2
Windows 8 Skin Pack 9.0 for Windows7(x86/x64)
AIMP 3.00 Build 961 RC2 Multilanguage
WinUSB Maker v1.7
Kaspersky Password Manager v5.0.0.157
Win RAR အကြောင်း
Integrating Technology and Digital Media in the Cl...
Ifile.it မှဒေါင်းလော့ ချနည်း
TeamViewer v6.0.11656 Premium Edition
လိုအပ်သောအခက်အခဲများ ၊ တောင်းဆိုချင်တာများရှိပါက C-Box မှာဖြစ်စေ ( nayminmaung89@gmail.com )သို့မေးလ်ပို့ ပြီးဖြစ်စေတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်